Ra'yiga:- Muujinta Doorka Muwaadinka. - Cakaara News
Ra'yiga:- Muujinta Doorka Muwaadinka.
Ra'yiga(CakaaraOpinion):- Marka hore waxaan Bahda CakaaraNews uga mahadcelinayaa Barnaamijka Doorka Muwaadinka ee aad Bilihii u danbeeyay noo furteen Fursadna aad noo siiseen anaga Joogna Qurbaha iyo kuwa dalkuba ku soo gudbiyaan Fikirkooda Bogan waana talaabo wanaagsan oo loo qaaday Dhanka Dhiirigalinta Doorka Shacabweynaha ka soo jeeda DDSI ee ku kala baahsan Daafaha Dunida. Hadaan u dhaadhaco Dulucdayda waxaan Doorbiday in aan Aragtidayda ka dhiibto Nidaamka warar Tebinta ama Samaynta Documentryga uu soo daayo telefishankeena soo jiitay Indhaha iyo Dhegaha Dadka afka soomaaliga ku hadla.
1-waxaan ku talobixin lahaa Samaynta iyo soo daynta Documentry-Film in Xooga la saaro Marka Soo daynta Xogaha Dhabta ah ee uu ku saabsan yahay si ujeedadii laga lahaa loo fahmo halka ay wariyayaashu Daqiiqadaha ugu badan ay iyagu hadal Dheer ay ka soo jeedinayaan Xogtiina in ka yar inta ay hadlayeen laga soo daayo ESTV kuna fiicnayd in wariyuhu Hoosta ka hadlo(Hana la kala sooco isku-xidhnaanta Noocyada Xogta)
2-wararka la soo daynayo halagu saleeyo Wakhtiga uu baxayo waxaad arki war la sii daayay Bil ka hor oo maanta sidii uu ahaa bil ka dibna ku baxaya ha loo kala sooco Xili tegay iyo xili la joogo . Nuxurku waa Wariyuhu 10 daqiiqo ha hadlo Xogtiina 2daqiiqo sidii Hilaaca ha kugu Dhaafto isbixin maysee Sida Wax ha laga Bedelo.